Salama daholo, eto izahay miaraka amina fampiharana Android mahatalanjona iray hafa, izay fantatra amin'ny hoe 1200 amin'ny 1 Apk. Manolotra kilalao mini sy taloha an'ny PC amin'ny smartphone-nao izay azonao atao ny milalao sy mankafy be dia be.
Ity fampiharana ity dia manolotra ny lalao PC rehetra amin'ny taona 90, izay nilalaovanao tamin'ny mbola kely. Noho izany, manolotra anao ny fahafinaretana mitovy amin'ny fitaovana Android anao. Afaka milalao taonina ianao. Izahay dia hizara ny sasany amin'izy ireo aminareo rehetra.
Betsaka ihany koa ny endri-javatra amin'ity fampiharana ity, izay hozarainay aminareo rehetra. Noho izany, raha hampiasa ity fampiharana ity ianao dia manoro hevitra anao izahay hahafantatra momba an'io fampiharana io alohan'ny hampiasana azy. Noho izany, mijanòna miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy, hahalala bebe kokoa sy ireo endri-javatra mahagaga amin'ity fampiharana ity.
Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity lalao ity ianao dia azonao atao koa ny mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany. Hamaly haingana araka izay tratra izahay. Noho izany, ndao hanomboka hahafantatra momba ity app ity.
Topimaso momba ny 1200 amin'ny Apk 1
Izy io dia fampiharana Android, izay manolotra lalao PC an-jatony roa. Izy io dia manolotra ny lalao tsara indrindra tamin'ny taona 90 mba hilalao amin'ny Smartphone. Ny sasany amin'izy ireo dia Super Mario, Bomberman, Tank 90, Ninja, sy ny maro hafa. Afaka mahita maro hafa ianao eto na ny tianao indrindra.
Ny lalao Nes 1200 amin'ny 1 Apk dia misy habe kely, izay ahafahanao miditra amin'izy rehetra. Izy io koa dia manolotra dikan-teny samihafa amin'ny lalao. Noho izany, aza mieritreritra fa namerimberina ny lalao mitovy. Azonao atao ny manamarina azy rehetra, ny tsirairay amin'izy ireo dia tsy mitovy amin'ny hafa.
Ny interface dia mitovy amin'ny PC taloha. Hahazo ilay interface voalohany mitovy amin'ny taloha ianao toa hahazo ny lisitry ny lalao rehetra, rehefa manokatra azy ianao. Ny lalao rehetra dia voalaza ao amin'ny ekipa voalohany amin'ny fampirantianao.
Mila mitady fotsiny ianao, izay tianao hilalaovana ary sokafy. Misy fanaraha-maso mitovy amin'izany omena, izay nampiasaina tamin'ny andro taloha. ny Lalao 2D manolotra zana-tsipìka efatra fanalahidy, amin'ny alalan'ny izay afaka mifehy ny tari-dalana. Ny fanalahidy fototra A sy B mitovy dia ampiana, izay ampiasaina amin'ny hetsika rehetra, ary ny bokotra roa farany amin'ny medaly ho an'ny fiatoana sy filalaovana.
Nomen'ny mpamorona azy io, miaraka amin'ny interface mitovy navelan'ny olona azy, izay mahatonga azy ho mahasarika sy miavaka. Koa alaivo fotsiny ity fampiharana ity dia ho zaza indray.
anarana 1200 amin'ny 1
Anaran'ny fonosana Nes.1200.games.in1.Apk
Endri-javatra lehibe amin'ny lalao 1200 ao amin'ny 1 Apk
Misy endri-javatra marobe amin'ity rindrambaiko ity. Ny sasany amin'izy ireo dia voalaza ao amin'ilay fizarana etsy ambony. Noho izany, hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe izahay rehetra eto amin'ny lisitra etsy ambany. Mijanona fotsiny aminay hahalala bebe kokoa.
Fanaraha-maso taloha sy fifandraisana ary fifaliana taloha
Mpilalao marobe amin'ny alàlan'ny Bluetooth na Wifi
Ahoana ny fampidinana 1200 amin'ny 1 Apk?
Izahay dia mizara rohy miasa azo antoka sy miasa ity fampiharana ity aminareo rehetra. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay hita eo ambony sy ambany eto amin'ity pejy ity. Kitiho eo izany ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Mila manova kely ianao, alohan'ny fizotry ny fametrahana. Raha manao izany dia mandehana any amin'ny Settings sy Open Security, avy eo Checkmark 'Source tsy fantatra' sy Exit. Azonao atao izao ny mametraka ity app ity amin'ny findainao
1200 amin'ny 1 Apk dia manolotra kilalao PC efa ho roanjato, izay azonao lalaovina amin'ny fitaovana Android. Misy lalao an-taonina, izay tian'ny zazalahy rehetra nilalao tamin'ny taona 90. Andramo ary ity app ity ary manantena izahay fa ho tianao izany. Sintomy izany ary manomboka milalao. Mitsidika hatrany ny Website ho an'ny fampiharana mahatalanjona kokoa.
Sokajy Games, Lalaom-pirahalahiana Tags Lalao 1200 in 1 apk, 1200 in 1 apk, Lalao 2D, Nes 1200 amin'ny Apk 1 Post Fikarohana
Pimaxneta Apk Download ho an'ny Android [2022 Tracker]